ကရစ်ရှနား - ဝီကီပီးဒီးယား
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သောဘုရား၊ သနားကြင်နာမှု၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ Yogeshwara သခင် ယောဂကျင့်စဉ် သို့မဟုတ် ယောဂီများ ဖာရာဗြမာန်၊ ဆဝမ်းယောင်းဖခကားဝမ်း (ကရစ်ရူန-ဝိုင်စနို့နိကိုင်း)
ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်၊ ဖားရာမက်မာန်၊နာရာနာ၊ ဗိဿနိုး၊ ဒယ်ချာနာဝါးတာရာ၊ ရာတာကရစ်ရှနား
ဂိုလောက၊ ဝိုင်ခွန်းထ့၊ ဝါးရီ့ဒါဝမ်း၊ ကိုးခူးလား၊ထ့ဝါးရာကာ
Bhagavata Purana, Harivamsa, Vishnu Purana, Mahabharata (Bhagavad Gita), Gita Govinda, Rukminisha Vijaya
သင်္ချာ၊ ဆူရာဆယ်နာ (လက်ရှိနေ့ရက် ဥတ္တရပဒေသပြည်နယ်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ)
Radha, Rukmini, Satyabhama, Jambavati, Kalindi, Mitravinda, Lakshmana, Bhadra, Nagnajiti and 16,000–16,100 other junior queens[note ၁]
ဗိဿနိုး၏ (၈)ကြိမ်မြောက် ဝင်စားသည့်ဘဝဟု ယုံကြည်ကြသည့် မီးနှင့်အလင်းရောင်ကို အစိုးရသော ဟိန္ဒူဘုရားဖြစ်သည်။ ဟိန္ဒူလူမျိုးတို့ အထွတ်အမြတ် ပြုကြသည်။ ထိုအမည်မှာ မည်းနက်ခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ်ရ၍ ရှေးဦးလူများသည် တိုင်းရင်းသား လူမည်းတို့ထံမှ ထိုအယူဝါဒကို လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း ညွှန်ပြသည်။ ကရစ်ရှနားအား ကယ်တင်မှုဆိုင်ရာ ဘုရားအဖြစ်ကိုးကွယ်ကြသည်။ 
↑ The regional texts vary in the identity of Krishna's wife (consort), some presenting it as Rukmini, some as Radha, some as Svaminiji, some adding all gopis, and some identifying all to be different aspects or manifestation of Devi Lakshmi.
↑ Edwin Bryant & Maria Ekstrand 2004, pp. 21–24.
↑ Edwin Bryant & Maria Ekstrand 2004, pp. 20–25, quote: "Three Dimensions of Krishna's Divinity (...) divine majesty and supremacy; (...) divine tenderness and intimacy; (...) compassion and protection.; (..., p.24) Krishna as the God of Love".
↑ Swami Sivananda (1964)။ Sri Krishna။ Bharatiya Vidya Bhavan။ p. 4။
↑ "Krishna the Yogeshwara"၊ The Hindu၊ 12 September 2014။
↑ Pradyumna။ ACK Private Limited။ 1976။ ISBN 81-8482-340-1။
↑ Naravane၊ Vishwanath S. (1987)။ A Companion to Indian Mythology: Hindu, Buddhist & Jaina (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Thinker's Library, Technical Publishing House။
↑ Sinha၊ Purnendu Narayana (1950)။ A Study of the Bhagavata Purana: Or, Esoteric Hinduism (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Library of Alexandria။ ISBN 978-1-4655-2506-2။
↑ ၉.၀ ၉.၁ John Stratton Hawley, Donna Marie Wulff (1982)။ The Divine Consort: Rādhā and the Goddesses of India။ Motilal Banarsidass Publisher။ p. 12။ ISBN 978-0-89581-102-8။
↑ Bryant 2007, p. 443.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကရစ်ရှနား&oldid=699882" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၄၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။